Iindaba-Kutheni iStainless steel Grill yam iRusting?
Iigrill zangaphandle ezenziwe ngensimbi engenasici zixhomekeke kwiimeko ezininzi ezinzima. Ezi ziquka imozulu, ubushushu, ii-agent zokucoca iikhemikhali kunye nemikrwelo, phakathi kwezinye izinto, nto leyo ezenza zibe sesichengeni ngakumbi kukuhlwa namabala. Nokuba igama le-stainless steel libonisa ukuba akukho mabala omhlwa, azikho izinto ezininzi ezingenakutshabalala. Ukunyamekela kunye nokugcinwa rhoqo kuyimfuneko ukwandisa ubomi babo benkonzo. Iigrill zensimbi ezingenasici ngumzekelo wale nto. Ngokuxhomekeke kuhlobo, amandla kunye nomphezulu wentsimbi engatyiwayo, inokungcoliswa ngamabala omhlwa okanye aguge ngokuhamba kwexesha.
Ukufuma, ubuninzi bomswakama kunye nomoya onetyuwa (njengakwimimandla yonxweme) kunokubangela amabala e-rust kumphezulu we-grill, njengoko i-bleach egxininiswe kunye nezinye izicoci ezine-chlorine.
I-bleach egxininisiweyo kunye nezinye izicoci eziqukethe i-chlorine zingabangela amabala e-rust, yiyo loo nto akufanele isetyenziswe kwinsimbi engenasici.
Iifom zomsi ngelixa usolisayo, ezinokutshisa kakhulu kwaye zitshintshe umbala wentsimbi engatyiwayo.
Imililo yegrisi ibangela ukuba umphezulu wentsimbi engenastainless ube mnyama, kodwa musa ukugqwalisa izinto. Ukucocwa rhoqo kwendawo yokugcoba kunye nengaphakathi le-grill kuya kunciphisa umngcipheko womlilo ongafunekiyo.
Qaphela: Intsimbi engatyiwa 'ayidusi' njengentsimbi yesiqhelo apho umaleko obomvu weoksidi wenza umphezulu kwaye ugqabhuke. Ukuba ubona irusi, mhlawumbi isuka kumasuntswana entsimbi (umzekelo, uboya bentsimbi) obuqokelelwe kumphezulu wentsimbi engatyiwayo. Ngala masuntswana anomhlwa hayi intsimbi engatyiwayo ngokwayo.
INDLELA YOKUTHINTELA IBHRILI YAKHO INGAKURU?
Iigrill kufuneka zihlambuluke emva kokusetyenziswa ngalunye ukukhusela ukugqwala. Qinisekisa ukuba ucima izitshisi ze-grill phambi kokucoca, kwaye usebenzise ibrashi yegrill ukususa nawaphi na amasuntswana anokuthi abambeke kwi grates. Ungaphinda ufune ukucoca ngebrashi yegrill engena-bristle ukuphepha naziphi na iibristles zocingo eziphumayo kwaye zincamathele kwiigrates zakho.
Kwiigrill zamalahle, kungcono ukuzicoca ngelixa zishushu, usebenzisa ibrashi kunye nokufefa ngamanzi. Emva kokucoca iigrayiti kunye nokuvumela i-grill ukuba iphole, lahla naluphi na uthuthu oluseleyo okanye amalahle ashiyekileyo kwi-grill kwaye ucoce ibhokisi lokupheka ngamanzi athambileyo anesepha.
Yinike Ukucoceka Okunzulu rhoqo
Ikwangumbono olungileyo ukwenza ucoceko olunzulu rhoqo. Ukwenza njalo, susa ama-grates uze uhlambulule ngesisombululo samanzi ashushu, enye ikomityi yesepha yesitya esithambileyo, kunye ne-1/4 indebe yesoda yokubhaka. Zicwilise iyure kwaye emva koko ulandele ngebrashi. Emva kokuba i-grill sele ipholile, sula i-grates phantsi ngelaphu elithambileyo ukuze ususe nayiphi na i-grill ehlala ibambelele ekutya okanye i-brush bristles.
Emva koko, hlambulula izitshisi ze-grill kunye ne-non-abrasive cleaner kunye nengubo. Uyakufuna ukugcina iitreyi zokuthontsiza zomile kwaye zicocekile, njengoko zinokuba sesichengeni sokwakha ukufuma. Ngebrashi yombhobho, coca imingxuma yesitshisi kunye nemingxuma yokungena nayo.
Ungalibali ukucoca umphandle wegrill yakho ngesepha yokuhlamba izitya kunye/okanye ipolishi elungele umphandle wegrill yakho. Ngaphandle kwegama layo, intsimbi "engenasici" inokuthi ichaphazeleke ngamabala kunye nomhlwa, kuxhomekeke kwibakala kunye nobukhulu bentsimbi.
I-oyile ye-Grill yakho
Emva kokucoca, gcoba zombini igesi kunye ne-charcoal grates kunye ne-oyile encinci ye-oyile yemifuno ukukhusela ukutya ukuba unamathele kubo kwixesha elizayo. Ukwenza oku kuya kunceda ukugxotha ukufuma - kwaye ngoko ke umhlwa. Nangona kunjalo, ukuze ukhuseleke, ungasebenzisi i-aerosol can ye-oyile yemifuno, njengoko iitoti ze-aerosol zaziwa ngokugqabhuka kufuphi namadangatye. Kunoko, gcoba i-rag yesitya kunye nexabiso elincinci leoli kwaye usebenzise oko ukugqoka i-grill.
Yigqume kwaye Ungene ngaphakathi
Ubumanzi bungunobangela omkhulu oya kugqwalisa i-grill yakho kwaye unciphise ubomi bayo. Emva kokuba ixesha lokuyolisa liphelile, beka inayiloni eqinileyo okanye isigqubuthelo sevinyl ngelaphu elifakwe phezu kwegrill yakho.
Ukuba kunokwenzeka, hambisa i-grill ephathwayo ngaphakathi kwigaraji okanye ishedi egqunyiweyo, ngakumbi ukuba uhlala kwimozulu ethanda ukufuma okuphezulu, imvula enkulu okanye ikhephu. Ukuba uhlala kufuphi nolwandle, qaphela ngokukhethekileyo malunga nokucoca kunye nokugubungela i-grill yakho, njengoko inqanaba eliphezulu letyuwa emoyeni linokuyidla.